Yini umsebenzi we-IP Public Address System？ -News-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co, LTD
ISIKHATHI: 2020-01-02 HITS: 82
Ningbo joiwo asize ikhasimende hhayi kuphela ucingo lwezimboni system like IP explosionproof/weatherproof telephone ,but also Uhlelo Lokuhlangana Lomphakathi Lomphakathi.
Ngaphezu kokuhlangabezana nemisebenzi yendabuko yokusakaza, uhlelo lokusakazwa komphakathi lwe-IP luyandiswa, oluhlinzeka ngokwanda kwamaphuzu okusakaza ngokuzayo kanye nokwenza ngcono kanye nokwenza ngcono uhlelo. Ngakho-ke, uyini umsebenzi wayo ohlelweni lwamakheli womphakathi we-IP? Ngabe iyahlangabezana nalezo zidingo? Uhlobo luni lwesipiliyoni silethe? Sizokwenza isingeniso esifushane:
1. Ihlanganisa yonke imisebenzi yezinhlelo zokusakaza zendabuko
Kubandakanya ukusakazwa kwenkulumo yebhizinisi, umculo wangemuva, njll., Kuyinjongo eyahlukahlukene ngesikhathi sokufakwa, ukusebenzisa ngokuphelele izinsiza zenethiwekhi ye-IP, ukugwema ukufakwa okuphindaphindiwe kwemigqa, lapho izikhungo ezikedijithali ze-Ethernet zingaxhunyaniswa ezikhungweni zokusakaza zedijithali, futhi zifinyelele kwabaningi ukuhlanganiswa kwenethiwekhi kokusakaza kanye namanethiwekhi ekhompyutha.
2. Izinhlelo eziningi zidlalwa ngasikhathi sinye
I-terminal ngayinye ingahle isethwe ukuthi idlale okuqukethwe okuhlukile, okungukuthi, iqoqo lezinhlelo elihambelana nesiginali esisodwa, ngaphandle kokuphazanyiswa. Ukulawulwa kwevolumu yesiginali esizimele.
3. Dual master control uhlelo
Uhlelo olumbili lwe-master oluqukethe iseva yekhompyutha kanye nenkosi yenethiwekhi ye-IP eshumekiwe, engahlanganiswa futhi iphathwe ngasikhathi sinye, nayo ingasebenza ngokuzimela, ithuthukise ngempumelelo ukuthembeka kohlelo.
4. Khetha okungahleliwe
Ukufaka imakrofoni noma ikhompyutha kunethiwekhi nge-IP, nokufaka isoftware yokusebenza, kungabona ukukhuluma, futhi kungaqokwa ukuthi kusakaze kubo bonke, ingxenye noma isiguli esisodwa.
5. Isikhathi Esidlaliwe
Isizinda ngasinye sokusakazwa kwezwi sokusakazwa kwenethiwekhi ye-IP sinekheli elizimele le-IP, futhi singathola umuntu ngamunye uhlelo oluhleliwe lokusakaza kanye nokusebenza kokudlala okuhleliwe kweseva yohlelo. Ungasetha futhi iringithoni yomculo eqondene nomuntu, bese udlala ngokuzenzakalela iringithoni yokuhamba ngokuya ngohlelo lomsebenzi oluhleliwe. Isheduli yomsebenzi ingashintshwa ngokuzenzakalela ngokusho kwentwasahlobo nokwindla, futhi izinketho ezikhethekile zokucushwa kwezinsuku zemvula namaholide zinikezwa.
Chofoza kusixhumanisi semibhalo ukuthola eminye imininingwane
6. Ukurekhoda kwezwi real-time kanye nokusakaza
Uhlelo lokusakaza kwenethiwekhi ye-IP umsebenzi wokutholwa kwesikhathi sangempela lungacindezela futhi lugcine izinhlelo ezivela kweminye imithombo yomsindo ngesikhathi sangempela futhi uzigcine kuseva, futhi kanyekanye i-rebroadcast kuma-terminals aqokiwe njengoba kudingekile. Umthombo ungaba ezinye iziteshi zomsakazo noma zomuntu siqu, amakhasethi amakhamera, izidlali ze-CD, izidlali zeMP3, imakrofoni, njll.
7. Mahhala On Demand
Izikhungo zokusakaza ezidijithali ezisatshalaliswa endaweni ngayinye zingalawulwa ngokulawulwa okukude, futhi noma yikuphi okufunwa kwedatha kuseva yomsindo kungaqedwa.
8. Umsakazo we-inthanethi
Ukusakaza kwenethiwekhi ye-IP kungaguqula izinhlelo zomsakazo we-Inthanethi ezitholwe ngesoftware ye-Intanethi ibe yifomethi yedatha yokusakaza inethiwekhi ye-IP, futhi idlale isiginali yokusakaza izwi ngesikhathi sangempela.
9. Abaholi bakhuluma online
Ukusakazwa Komlilo Okuphuthumayo
Uhlelo lungaxhunywa kumasignali e-alamu yomlilo ukufeza ukuxhumana komlilo kanye nokusekela ama-alamu aseduze. I-terminal inomsebenzi oqinile wokusika ongalawula isilawuli somsindo esinama-waya amathathu.
Ukukhiqizwa Komsindo Wamathuluzi
Yazi ukuqoshwa, ukuguqulwa nokuhlelwa kwezinto zedijithali, futhi iseva yohlelo ingagcina izinhlelo zomculo noma izinhlelo zezwi ezingaphezu kwezinkulungwane zamahora.
I-Ningbo Joiwo ivikela ukuqhuma ezikhethekile ngocingo lwezimboni njenge-IP noma uhlelo lwefoni lwe-analog, ucingo olungenayo isimo sezulu, ucingo oluqhuma ukuqhuma, ucingo olunobufakazi bokucekela phansi, izingcingo zamahhala, ucingo lomphakathi kanye nocingo lwasejele.Singanikeza isisombululo sohlelo lwe-PBX esingasetshenziselwa uthuli oluyingozi nomoya wegesi, i-petrochemical imboni, Umhubhe, imetro, ujantshi, ijubane, olwandle, umkhumbi, ulwandle, okwami, isitshalo samandla, ibhuloho, ihhotela, isibhedlela, ijele.
Ucingo lwethu lwesiboshwa lwafakwa eYurophu